.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: SWF FLV to MP3 Converter [ Portable ]
SWF FLV to MP3 Converter [ Portable ]
ဒီ Converter လေးကတော့ Flash Song တွေကို Mp3 ဖော်မက်ပြောင်းချင်တာတို့၊ You Tube က ဒေါင်းထားတဲ့ FLV
ဗွီဒီယို ဖိုင်တွေကိုပါ Mp3 အဖြစ်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြား Video Converter တွေအများကြီး ရှိပေမယ့်လည်း
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက သုံးရတာ လွယ်ကူပြီး ဖိုင်ဆိုဒ်က 1MB တောင် မရှိပါဘူး။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လိုက်ရှာပြီး ဒေါင်းတာ
Patch ဖိုင်ထည့်မှ Full Version ဖြစ်တာတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါလေးက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Portable ဖြစ်အောင်
လုပ်ထားတာလေးပါ။ Flash သီချင်း SWF ဖိုင်တွေနဲ့ FLV ဗွီဒီယို သီချင်းတွေကို Mp3 ပြောင်းမယ်ဆိုရင် Add Files
ကို နှိပ်ပြီး တစ်ပုဒ်ချင်း ထည့်နိုင်သလို Folder တစ်ခုထဲကဟာတွေ အကုန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ Add Folder ကို
နှိပ်ပြီးထည့်ပေါ့နော်။ ပြီးရင် Convert to Mp3 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။ အဲဒါဆို Mp3 ပြောင်းပါပြီ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ..။
Download: SWF FLV to MP3 Converter [ Portable ]
Labels: Converter, Flash Song, Mp3, Software